Raw Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1) Nsukka - Phcoker
RAW SYNEPHRINE HCL PUTA
RAW LORCASERIN PUTA
RAW LORCASERIN HCL PUTA
Astaxanthin eke (472-61-7)
Mmanụ sunflower (Sịlịkri mkpụrụ) 83%
Linoleic acid (CLA) 95%
Glutathione ntụ ntụ
Nootropics （smart ọgwụ）
Cycloastragenol ntụ ntụ
Raw YK-11 ntụ ntụ
Ngwakọta nke 7P na-eme ka ọ dị elu
Mpempe akwụkwọ PRL-8-53 dị ala
Raw Nooglutyl ntụ ntụ
Egbochi ịka nká
NMN ntụ ntụ
Raw Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1)
Pramiracetam ntụ ntụ bụ ihe mmepụta ihe racetam sịntetị maka nzube nke mmelite mmelite ...
Otu: 25kg / Drum
ikike: 1018 kg / ọnwa
Raw Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1) video
Raw Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1) Nkọwa
Raw Pramiracetam ntụ ntụ (nke a makwaara dịka Pramistar) bụ ihe na-eme ka cognitive (nootropic) nke sitere na piracetam, nke mbụ racetam, site na-etinye akụkụ amide na piracetam na otu dipropan-2-ylamino ethyl group. Nhọrọ a na-enye Raw Pramiracetam ntụ ntụ ka ọ bụrụ ihe karịrị ike piracetam.
Usoro nke Raw Pramiracetam ntụ ntụ adịghị ama nke ọma, mana ọ na-egosi na ọ ga-agbanwe ọrụ EEG n'ime oke ọ bụla a nwalere (nwata na okenye) ma nwee ike ịme ka ịkwalite ịkwado dị elu. O yiri nke piracetam na racetams ndị ọzọ n'echiche na usoro ya yiri ịdabere na glands na ụfọdụ mmetụta dị elu, ma na-emeghị ka usoro ndị ahụ dị elu karịa.
Raw Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1) Smmezi
Product Name Raw Pramiracetam ntụ ntụ
Chemical Aha Amacetam, Raw Pramiracetam powderum
Brand Name Remen (ParkeDavis)
Klaasị ọgwụ ọjọọ Onye na-elekọta ndị na-akwaga migraine
CAS Number 68497-62-1
molekụla Fnhazi C14H27N3O2
molekụla Wasatọ 269.38 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 269.38
Mgbu Point 47-48 ° C
ObụpdeING Point bp0.15 162-164 ° C
Ọkara Ndụ nke Ndụ Banyere awa 5
Agba Kristal ọcha
Sume H2O: soluble10mg / mL, doro anya
Sịkwa akwa Tigwe 2-8 ° C
Antinye Mee ka ncheta dịkwuo elu ma welie ikike ịmụ ihe
Pramiracetam ntụ ntụ bụ ihe na-akpali akpali nke na-eme ka ndị na-eto eto racetam na ọgwụ ọjọọ. Pramiracetam bụ otu n'ime ụbụrụ kachasị ike nke na-eme ka ọ dị elu, ọ bụ 5 ka 30 ugboro karịa ike ya. Ọ na-eme ka nlekwasị anya, nchebe, na ebe nchekwa dị mma. N'adịghị ka ụfọdụ n'ime racetams ndị ọzọ, a nwalewo pramiracetam na ndị okenye ahụ na-ahụ ike kama ilekwasị anya na ndị agadi bụ ndị na-enwekwaghị ikike ime uche ha. N'ụzọ doro anya, pramiracetam na-enyere aka ịzụlite ncheta oge ogologo n'ime ule ndị a.
Nke a nootropic na-arụkwa ọrụ dịka onye na-adịghị ahụ maka nrụrụ na-anaghị egbochi ya ma nwee ike igbochi ncheta na mgbada zuru ezu.
Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1) Ime ihe
Dị ka ọtụtụ racetams, na ọtụtụ ihe ndị na-enweghị ihe ọ bụla, pramiracetam na-emetụta ntọhapụ nke ụbụrụ ụbụrụ, nke a na-akpọ neurotransmitters, nke na-enye ohere ikesa nke mgbaàmà n'etiti mkpụrụ ndụ nerve. Ma, pramiracetam na-eme ihe dị iche iche. Ọ naghị akwalite saịtị ndị ntanetransmitter kpọmkwem, mmetụta nke ga-abụ mmụba na mmepụta na ịhapụ nke neurotransmitter ahụ.
Pramiracetam na-enye aka n'echiche zuru oke. Pramiracetam na-arụ ọrụ site n'ịba ụba dị elu Choline ke hippocampus. Dika ochicho ga-enwe ya, Choline mere ka o buru onye neurotransmitter nke a na-akpọ acetylcholine, nke bu isi ihe omimi nke usoro ihe omuma dika itinye uche, mmuta na ihe omuma. Ya mere, ihe pramiracetam na-eme bụ ịmepụta saịtị ndị ntanetị maka Acetylcholine, nke ahụ na-akpali ọrụ dị ukwuu na hippocampus. Ọrụ mmezi a na-eme ka e nwee ncheta ọhụrụ na ederede ndị okenye.
ngwa of Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1)
Emere Parti-Davis na-eme Pramiracetam azụ na azụ na 1970s ma na-eme nchọpụta na US na 1979. Ọ bụ ezie na a kụziiri ya ọtụtụ ugboro dịka ọgwụgwọ maka ihe nchekwa nke metụtara ụbụrụ na ọnyá dịka Alzheimer, n'oge a, FDA anaghị akwado ya maka ụdị ọ bụla.
Nke ahụ kwuru, pramiracetam ahụwo ihe ịga nke ọma na Europe. A na-ere n'okpuru aha ndị a na-akpọ Neupramir, Pramistar, na Remen, a na-edekarị ya maka ọgwụgwọ nke ọnọdụ nyocha dịka dementia, dyslexia, na ADHD.
-atụ aro Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1) Ọgwụgwọ
Ọgwụgwọ kachasị dịgasị iche site n'otu n'otu gaa na mmadụ, nkwenye ọgwụ pramiracetam bụ 600mg-1200mg, ọ ga-akwado ịkekọrịta mkpokọta ụbọchị a n'ime abụọ ma ọ bụ atọ, n'ihi na pramiracetam nwere 5 na 6 hour ọkara ndụ. Ihe kariri nke oma na ị kewaputara dose na oge nke ubochi, otua ka nootropic ga-adi n'ime usoro gi, nke ka mma.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ mmadụ dị ugbu a jiri ngwongwo dum nke 1200 mg nke pramiracetam kwa ụbọchị, a chọpụtara na ọ dị irè ma dị mma, ọ pụkwara ịbụ ebe dị mma maka ịchọta afọ ojuju mmadụ. Ma, ọ bụ ihe amamihe dị na ya mgbe ịmalite iji ọgwụ dị irè kachasị dị ala ma dozie ọnụọgụ dị mkpa.
uru of Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1)
Nchekwa ka mma
Ịbawanyewanye Ntị na Ịmụbawanye Ịmụta Ịmụta
Ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya
NKWUP ANDTA NA NKWU:
A na-ere Ihe Nke A Maka Nchọpụta Naanị. Usoro irere tinye. Ọbụghị maka Oriri mmadu, ma ọ bụ ọgwụ, ọgwụ anụ, ma ọ bụ nke ụlọ.
Nsi-189 isi ntụ ntụ (1270138-40-3)
Mw677) ntụ ntụ (159752-10-0).
Magnesium Raw (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate (778571-57-6)
Shangke Chemical bụ ụlọ ọrụ dị elu na-arụ ọrụ na ngalaba ọgwụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ (APIs), yana ọtụtụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ, akụrụngwa mmepụta mbụ na ụlọ nyocha iji chịkwaa ogo n'oge mmepụta.
Xuchang Chemical Chemical Park, Henan Province, China